တနျဖိုးမွငျ့မားတဲ့ ဗာနာကို တူဟယျလျ ဆကျထိနျးမှာလား? ဟာလနျးအတှကျ ရှငျးထုတျမှာလား? – Sports A2Z
တနျဖိုးမွငျ့မားတဲ့ ဗာနာကို တူဟယျလျ ဆကျထိနျးမှာလား? ဟာလနျးအတှကျ ရှငျးထုတျမှာလား?
ဂြာမနီက လာတဲ့ သတငျးတှအေရ ခယျြလျဆီးအသငျးဟာ သငျ့တျောတဲ့ ကမျးလှမျးမှုတှသော ရရှိလာခဲ့ရငျ ဒီနှရောသီမှာ တိုကျစဈမှူး တီမို ဗာနာကို ရှငျးထုတျသှားတော့မယျလို့ ဖျောပွသှားခဲ့ပွီး Sky Germany ရဲ့ အဆိုအရ အပွာရောငျတပျသားအဖွဈ တနှဈသာ အသုံးတျောခံထားရသေးတဲ့ ဂြာမနီသားကို စိတျဝငျစားလာတဲ့ အသငျးကွီးတှဆေီ ​ကမျးလှမျးသှားခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့နှမှော RB လိုကျပျဇျအသငျးကနေ စတမျးဖို့ဒျဘရဈချြမွဆေီ ပေါငျ ၄၅ သနျးနဲ့ ပွောငျးရှလေ့ာခဲ့ပမေယျ့ တာထှကျပရီးမီးယားလိဂျရာသီမှာ ရုနျးကနျခဲ့ရပွီး ပွိုငျပှဲစုံ ၁၂ ဂိုးသာသှငျးယူနိုငျသလို အသငျးဖျောတှအေတှကျ ၁၅ ဂိုးသာ ဖနျတီးပေးနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ ကမ်ဘာ့အဆငျ့တိုကျစဈမှူး မပီသဘူးဆိုတဲ့ သိမျးကြုံးဝဖေနျမှုတှကေို ဗာနာက လကျရှိမှာ ခံယူခဲ့ရပါတယျ။
အသကျ ၂၅ နှဈသားဟာ ခယျြလျဆီးရဲ့ ခနျြပီယံလိဂျဖလားအောငျမွငျမှုမှာတော့ အဓိကကတြဲ့ အခနျးကဏ်ဍမှာ ရှိနခေဲ့ပွီး အသငျးကိုမောငျးနှငျနိုငျခဲ့တယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့မလေနှောငျးပိုငျးမှာတော့ နညျးပွ တူဟယျလျက “တီမိုက ငယျရှယျနုနယျပါသေးတယျ။ တိုးတကျဖို့ အလားအလာကောငျးတှေ ရှိနတေယျ။ ဒါဟာ ကြှနျတျောတို့ သူ့ဆီက တောငျးဆိုနတေဲ့အရာပါ”
“သူသာ စိတျရောကိုယျရော အနားယူပွီး ပွနျစဥျးစားသုံးသပျနိုငျမယျဆိုရငျတော့ ကြှနျတျောထငျပါတယျ….သူဟာ နောကျနှဈမှာ ကွီးမားတဲ့ ခွစှေမျးပွမှုတှေ ပွုလုပျလာပါလိမျ့မယျ။ အခု သူက လူသဈမဟုတျတော့ဘူး။ အင်ျဂလနျမွရေဲ့ ပတျဝနျးကငျြမှာ အထိုငျကသြှားပွီ။ သူ့အသငျးဖျောတှအေကွောငျးကို သူနားလညျနပွေီ”
“ပထမဆုံးတာထှကျမှာ သူဘာတှေ လှဲခဲ့လဲဆိုတာကို ကောငျးကောငျးသိရှိနပွေီ။ ဘယျလိုပွုပွငျပွောငျးလဲရမလဲဆိုတာကိုလညျး သူသဘောပေါကျနလေောကျပါပွီ။ ဒါအသိစိတျက သူ့ကို ကောငျးကောငျးအကူအညီပေးပါလိမျ့မယျ။ ဒီဖွဈစဥျကို မွနျမွနျလညျပတျအောငျ ကြှနျတျောတို့ သူ့ကို မောငျးပေးနပေါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ကြှနျတျောတို့ သူ့ကို လိုအပျပါတယျ”လို့ ဆိုခဲ့ခွငျးမှာ ဗာနာကို ဂိုးသှငျးနိုငျအောငျ ယုံကွညျမှုပေးသှားမယျလို့ ဆိုခဲ့ဖူးတာပါ။
ခယျြလျဆီးကှငျးလယျလူဟောငျး ဆကျဈ ဖာဘရီဂတျဈကတော့ “ကြှနျတျောက ခယျြလျဆီးရဲ့ ပှဲစဥျတိုငျးကို သခြောကွညျ့ဖွဈတယျ။ ခိုငျဟာဗတျဇျနဲ့ တီမို ဗာနာတို့ကို အနီးကပျ လလေ့ာဖွဈတယျ။ သူတို့ရဲ့ ကစားပုံက ကြှနျတျော့ကို ဆှဲဆောငျထားနိုငျတယျ။ နောကျရာသီမှာ သူတို့နှဈဦးစလုံးရဲ့ အကောငျးဆုံးခွစှေမျးတှကေို တကယျမွငျတှရေ့တော့မှာပါ။”
“ဗာနာက ဂိုးတှေ ဖွုနျးတီးခဲ့တာတော့ မှနျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူ့ရဲ့ပွေးလှားမှုနဲ့ အရှတှေ့ကေ ကောငျးမှနျလှပါတယျ။ ခြိနျသားကိုကျဖွဈတယျ။ လူကြှံဘောမမိဘူး။ ဒီကနေ သူ့ရဲ့အမွနျနှုနျးကတဆငျ့ ဂိုးအခှငျ့အရေးတှေ ရလာတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီခတျေမှာ ဗာနာလို ကစားသမားမြိုးက တနျဖိုးဖွတျမရပါဘူး။ ကှငျးလယျကစားသမားတှရေဲ့ စိတျကွိုကျပုံစံမြိုးပါ” လို့ ဗာနာကို ခယျြလျဆီးအသငျးမှာ ဆကျထိနျးသှားဖို့ တူဟယျလျကို တိုကျတှနျးထားခဲ့တာကိုလညျး မွငျတှရေ့ခြိနျမှာ ဟာလနျးရဲ့ အပွောငျးအရှပေုံ့ပွငျအရ ဂြာမနျသားရဲ့အနာဂတျ ဘာဖွဈလာမလဲဆိုတာတော့ စောငျ့ကွညျ့ရမှာဖွဈကွောငျး ဖျောပွလိုကျရပါတယျ။
ZAWGYI: ဂျာမနီက လာတဲ့ သတင်းတွေအရ ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ သင့်တော်တဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုတွေသာ ရရှိလာခဲ့ရင် ဒီနွေရာသီမှာ တိုက်စစ်မှူး တီမို ဗာနာကို ရှင်းထုတ်သွားတော့မယ်လို့ ဖော်ပြသွားခဲ့ပြီး Sky Germany ရဲ့ အဆိုအရ အပြာရောင်တပ်သားအဖြစ် တနှစ်သာ အသုံးတော်ခံထားရသေးတဲ့ ဂျာမနီသားကို စိတ်ဝင်စားလာတဲ့ အသင်းကြီးတွေဆီ ​ကမ်းလှမ်းသွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နွေမှာ RB လိုက်ပ်ဇ်အသင်းကနေ စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ခ်ျမြေဆီ ပေါင် ၄၅ သန်းနဲ့ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပေမယ့် တာထွက်ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီမှာ ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီး ပြိုင်ပွဲစုံ ၁၂ ဂိုးသာသွင်းယူနိုင်သလို အသင်းဖော်တွေအတွက် ၁၅ ဂိုးသာ ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ကမ္ဘာ့အဆင့်တိုက်စစ်မှူး မပီသဘူးဆိုတဲ့ သိမ်းကျုံးဝေဖန်မှုတွေကို ဗာနာက လက်ရှိမှာ ခံယူခဲ့ရပါတယ်။
အသက် ၂၅ နှစ်သားဟာ ချယ်လ်ဆီးရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားအောင်မြင်မှုမှာတော့ အဓိကကျတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ရှိနေခဲ့ပြီး အသင်းကိုမောင်းနှင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့မေလနှောင်းပိုင်းမှာတော့ နည်းပြ တူဟယ်လ်က “တီမိုက ငယ်ရွယ်နုနယ်ပါသေးတယ်။ တိုးတက်ဖို့ အလားအလာကောင်းတွေ ရှိနေတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ သူ့ဆီက တောင်းဆိုနေတဲ့အရာပါ”
“သူသာ စိတ်ရောကိုယ်ရော အနားယူပြီး ပြန်စဉ်းစားသုံးသပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်….သူဟာ နောက်နှစ်မှာ ကြီးမားတဲ့ ခြေစွမ်းပြမှုတွေ ပြုလုပ်လာပါလိမ့်မယ်။ အခု သူက လူသစ်မဟုတ်တော့ဘူး။ အင်္ဂလန်မြေရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အထိုင်ကျသွားပြီ။ သူ့အသင်းဖော်တွေအကြောင်းကို သူနားလည်နေပြီ”
“ပထမဆုံးတာထွက်မှာ သူဘာတွေ လွဲခဲ့လဲဆိုတာကို ကောင်းကောင်းသိရှိနေပြီ။ ဘယ်လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရမလဲဆိုတာကိုလည်း သူသဘောပေါက်နေလောက်ပါပြီ။ ဒါအသိစိတ်က သူ့ကို ကောင်းကောင်းအကူအညီပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်ကို မြန်မြန်လည်ပတ်အောင် ကျွန်တော်တို့ သူ့ကို မောင်းပေးနေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ သူ့ကို လိုအပ်ပါတယ်”လို့ ဆိုခဲ့ခြင်းမှာ ဗာနာကို ဂိုးသွင်းနိုင်အောင် ယုံကြည်မှုပေးသွားမယ်လို့ ဆိုခဲ့ဖူးတာပါ။
ချယ်လ်ဆီးကွင်းလယ်လူဟောင်း ဆက်စ် ဖာဘရီဂတ်စ်ကတော့ “ကျွန်တော်က ချယ်လ်ဆီးရဲ့ ပွဲစဉ်တိုင်းကို သေချာကြည့်ဖြစ်တယ်။ ခိုင်ဟာဗတ်ဇ်နဲ့ တီမို ဗာနာတို့ကို အနီးကပ် လေ့လာဖြစ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ ကစားပုံက ကျွန်တော့်ကို ဆွဲဆောင်ထားနိုင်တယ်။ နောက်ရာသီမှာ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းတွေကို တကယ်မြင်တွေ့ရတော့မှာပါ။”
“ဗာနာက ဂိုးတွေ ဖြုန်းတီးခဲ့တာတော့ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ပြေးလွှားမှုနဲ့ အရွေ့တွေက ကောင်းမွန်လှပါတယ်။ ချိန်သားကိုက်ဖြစ်တယ်။ လူကျွံဘောမမိဘူး။ ဒီကနေ သူ့ရဲ့အမြန်နှုန်းကတဆင့် ဂိုးအခွင့်အရေးတွေ ရလာတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီခေတ်မှာ ဗာနာလို ကစားသမားမျိုးက တန်ဖိုးဖြတ်မရပါဘူး။ ကွင်းလယ်ကစားသမားတွေရဲ့ စိတ်ကြိုက်ပုံစံမျိုးပါ” လို့ ဗာနာကို ချယ်လ်ဆီးအသင်းမှာ ဆက်ထိန်းသွားဖို့ တူဟယ်လ်ကို တိုက်တွန်းထားခဲ့တာကိုလည်း မြင်တွေ့ရချိန်မှာ ဟာလန်းရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ပုံပြင်အရ ဂျာမန်သားရဲ့အနာဂတ် ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။